China Round bar qodista mashiinka godka qoto dheer warshad iyo saarayaasha |Deshen
Mashiinka dalool qoto dheer ee bar wareega
Tayada dusha sare:tayo sare leh
Dalabka Tusaalaha:haa aqbal
Heerka aan caadiga ahayn:Haa aqbal
Caarada Carbide ee garaacday hal biibiile Gundrilling birta qodista Deep Hole Gundrilling qori carbide Drill Bit
Sariirta mashiinka iyo tareenada hagaha ayaa lagu tuuray hal jir, sariirta mashiinka waxaa lagu daaweeyaa gabowga dabiiciga ah in ka badan laba sano si loo hubiyo waxqabadka xasilloon ee mashiinka.
Qalabka ugu muhiimsan: laga keeno Yurub, Ameerika, Japan iyo Taiwan
Nidaamka xakamaynta: Omron NC ama jiilka cusub ee CNC
Wakiilka: Iscar dalool qoto dheer oo taxana ah dalool qori daab
Qaabka Mashiinka qodista godka qoto dheer DS2-25mm
Awood Dhexroor qodista 2-16mm
Qoto dheer ee ceelka hal dhinac 650mm
Dhexroorka xajin ee ugu badan ee chuck 45mm (waxay kordhin kartaa chuck dhalada)
Dhexroorka xajin ee ugu yar ee chuck 3.5mm
Heerka xooga saarida galitaanka 0.05 (gudahood)
Xawaaraha lafdhabarta 0-8000r/daqiiqo
Beddelka inta jeer ee workpiece 0.75KW
Wadarta awooda 11KW
Qulqulka soo-saarka bamka saliidda 0-25L/daqiiqo
Awood Dhexroor qodista 2-25mm
Dhexroorka xajin ee ugu badan ee chuck 70mm (waxay kordhin kartaa jeexjeexyada)
Wadarta awooda 13.5KW
Qaabka Daloolka Eccentric 2-12mm god qoto dheer mashiinka qodista
Awood Dhexroor qodista 2-12mm
Hore: TSK2180 CNC FIIRO GAAR AH MAKIINADDA HONING.
Xiga: Tallaabada Qoryaha La Tilmaansan Karo
1.Kontoroolka tayada leh: dhammaan qalabyadayadu waxay ku jiraan imtixaan sax ah ka hor inta aan la dhoofin.Waxaan haynaa 10 mashiinka tijaabada ah.
Qiimaha 2.Manufacture's: Waxaan nahay wax soo saarka, dhammaan qiimaha waa qiimaha warshadda, qiimaha tartanka
3. Si degdeg ah uga jawaab: Weydiintaada la xidhiidha agabkayaga, waxaanu kuugu soo jawaabi doonaa 24 saacadood gudahood.
4. OEM & ODM waa la aqbalay: Waxaan soo saari karnaa qalab sida ku cad sawirkaaga.
5. Ilaalinta goobtaada iibka, fikradaha naqshadeynta iyo dhammaan macluumaadkaaga gaarka ah.
6. Adeegga tolida qoriga ayaa ugu fiican
Dhexroorka caarada (mm) Dhererka kaarbide (mm) Dhererka shiidida (mm) Dulqaad (mm)
1. Waxaan nahay Is-dhexgalka Warshadaha iyo Ganacsiga tungsten carbide taxane ah oo soo saara, Badeecada ugu ballaaran, Awoodda wax-soo-saarka ugu fiican, xakamaynta tayada ugu fiican, Adeegga ugu fiican, Qiimaha tartanka;
2. 100% kormeerka QC ka hor inta aan la dhoofin;
3. Jawaab celin 24 saacadood gudahood iyo Isgaadhsiin Wanaagsan oo Ingiriisi ah;
4.Good iibka dhoofinta tababarka ayaa ku siin kara talo-bixin xirfadeed oo ku saabsan alaabta;
5. Samaynta habaysan si waafaqsan waraaqahaaga sawirka;
6.Aqbal amar maxkamadeed iyo amar yar;
7.Aqbal dhammaan shuruudaha lacag bixinta ee T/T, L/C, midowga galbeedka, Paypal, Xaqiijinta Ganacsiga, iwm.;
8. Soo bandhig muunado lacag la'aan ah iyadoo la raacayo shuruudaha xamuulka uu bixiyo macaamilka;
9.Survey Emailka isticmaalka alaabta waxa loo soo diri doona wakhti ku haboon si loo dhagaysto jawaab celintaada,ujeedadayadu waxa ay isku dayaysaa in aynu ka dhigno macaamiil kasta oo ku qanca anaguna labada dhinacba GUUL-GUUL!
Dhoofinta degdega ah:
Dezhou Drillstar Cutting Tool Co., Ltd waa soo saaraha iyo dhoofiyaha ee qalabka goynta qoto dheer oo ay ku jiraan laylinta qoryaha, reamers qoryaha, BTA, Trepanning, qalabka caajiska ah, qalabka honing iwm, iyo sidoo kale qalabyada qalabka.Waxaan sidoo kale qaybin saliidaha goynta, Furimaha Dagaalka, bamka buufin saliid dhamaystiran xirmo on garoonka godka qoto dheer.Waxaan ku hawlannahay naqshadaynta alaabada si waafaqsan heerarka tayada caalamiga ah oo leh qaabeynta ugu fiican si aan u siino wax soo saar wanaagsan iyo tayada macaamiisha. Laga bilaabo sanadka 2010, waxaan qabsanay meel adag suuqa gudaha waxaana sidoo kale kasbannay macaamiil badan oo ku nool Koonfur Bari Aasiya , Yurub iyo kuwa kale.Waxaan nahay bixiyaha xalinta Hal-Stop ee qalabka goynta qoto dheer. Taas waxaa dheer, waxaan nahay soo dejinta Tungsten Carbide Tips & Ulaha iyo alaabta kale ee cayriin ee Europe iyo USA
Q1: Waa maxay dammaanadda alaabta carbide tungsten?
A1: Waxaan leenahay mashiinka darajooyinka saxda ah ee saxda ah si loo xakameeyo cabbirrada joomatari oo aan ku dabaqno substrate cabbirka hadhuudhka aadka u fiican ee lagu dahaadhay dahaarka waxqabadka sare si loo dammaanad qaado cimriga alaabtayada, taas oo qancin karta xaalad kasta oo shaqo. , waxaanu qaadan doonaa kharashka dhoofinta iyo beddelka.
Q2: Ma bixisaa muunado bilaash ah?
A2: Haa, sida caadiga ah waxaan bixinaa muunado lacag la'aan ah si loo tijaabiyo iyadoo loo eegayo xaaladda xamuulka ee uu bixiyo macaamilka.
Q3: Waa maxay dalabkaaga ugu yar?
A3: Waxaan ku tusi doonaa MOQ shay kasta oo xaashida xigashada ku jira.Waxaan aqbalnaa tijaabada iyo amarka tijaabada.Haddii tirada hal shay aysan gaari karin MOQ, qiimuhu waa inuu noqdaa qiimaha muunada.
Q4: Waa maxay wakhtiga keenista alaabtaada?
J4: Waxay kuxirantahay helitaanka alaabada
Q5: Ma soo saari kartaa carbide alaabta gaarka ah?
J5: Haa, waan awoodnaa.Waxaan soo saari karnaa labadaba miraha dhamaadka caadiga ah iyo qalabyada gaarka ah.Waxaan u samayn karnaa si waafaqsan sawiradaada iyo tusaalooyinkaaga.
Q6: Ma heli karaa codsigeyga jadwalka shaqada?
J6: Haa, waxaanu kuu soo diri doonaa jadwalka shaqada ee dalabkaaga toddobaad kasta.Waxaan baari doonaa oo tijaabin doonaa dhammaan badeecooyinka haddii ay dhacdo in ay jiraan qaybo ka maqan oo waxyeello leh ka hor intaan la dhoofin.Sawirada baadhista faahfaahsan ee dalabka ayaa laguu soo diri doona xaqiijintaada ka hor intaanad keenin.
Jawaab-celintaadu waa sharaftayada ugu fiican, fadlan ha ka waaban inaad na siiso jawaab-celintaada qiimaha leh waxaanan ku siin karnaa kalsooni dheeraad ah oo ku saabsan shirkaddayada iyo alaabtayada.
hadii aad wax dhib ah qabtid pls ila soo xiriir
Jumlo CNC god qoto dheer oo la tilmaami karo gundrill Dri...
T2120G Qoto dheer qodista iyo mashiinka caajiska ah
Afar dunta CNC hydraulic cylinder block qoto dheer...